Waves ego taa
Waves calculator online, onye ntụgharị Waves. Waves ego taa na ahia ahia ego di iche iche.
Waves ego na Nigerian naira (NGN)
1 Waves (WAVES) nhata 436.18 Nigerian naira (NGN)
1 Nigerian naira (NGN) nhata 0.002293 Waves (WAVES)
Ntụgharị Waves na Nigerian naira. Taa Waves ọnụego Ka Nigerian naira na 06/06/2020.
Waves ego na dollars (USD)
1 Waves (WAVES) nhata 1.13 dollars (USD)
1 dollar (USD) nhata 0.89 Waves (WAVES)
Ntụgharị Waves na dollar. Taa Waves gbadaa dollar na 06/06/2020.
A na-agbakọ ọnụ ahịa Waves site na azụmahịa ọ bụla nke ụzọ abụọ dị n'ahịa azụmaahịa si akwụ ụgwọ ọ bụla. Nchịkọta mgbakọ na mwepụ banyere ọnụahịa ngwa ngwa na azụmaahịa na-enye gị ohere gbakọọ ọnụego Waves maka taa 06/06/2020. Ntụle oge Waves mgbanwe ego na-eme ka enwe ike ịkọ amụma a Waves ọnụego mgbanwe maka echi. Etu ọnụahịa "Waves" 06/06/2020 "bụ maka iji n'efu. A na-emelite ozi dị na ya ozugbo.
Waves ngwaahịa taa
Waves na mgbanwe taa bụ ibe maka azụmaahịa ego ego Waves na mgbanwe nke ụwa ego ego. N’edemede Waves na mgbanwe taa, anyị na-egosi kacha mma Waves na-azụta ma na-ere ọnụego, nke ụdị abụọ nke aka na aka na azụmaahịa ahụ, ma wepụta jikọ aka na mgbanwe ebe azụmaahịa ahụ mere. Họrọ mgbanwe kacha mma ma ọ bụ kacha mma Waves, na-enyocha ọnụego ya na tebụl nchịkọta nke mgbanwe mgbanwe. Waves ọnụahịa n'ime Nigerian naira - ọnụego nke Waves n'ihe metụtara ego nke Nigerian naira maka obere oge.
Ego kachasị mma maka ireahịa Waves nke ị nwere ike ịchọta na ebe a.
Ọnụahịa kacha mma maka ịzụ Waves nke ị nwere ike ịchọta na ebe a.
WAVES/USDT $ 1.14 $ 1.03 Best Waves gbanwere Tether
WAVES/BTC $ 1.14 $ 1.10 Best Waves gbanwere Bitcoin
WAVES/ETH $ 1.15 $ 1.11 Best Waves gbanwere Ethereum
WAVES/USD $ 1.14 $ 1.12 Best Waves gbanwere US dollar
WAVES/EUR $ 1.15 $ 1.12 Best Waves gbanwere Euro
WAVES/RUB $ 1.12 $ 1.12 Best Waves gbanwere Russian ruble
WAVES/UAH $ 1.12 $ 1.10 Best Waves gbanwere hryvnia
WAVES/KZT $ 1.15 $ 1.15 Best Waves gbanwere Kazakhstani tenge
WAVES/USDN $ 1.14 $ 1.12 Best Waves gbanwere Neutrino Dollar
WAVES/IDR $ 1.14 $ 1.14 Best Waves gbanwere Indonesian rupiah
WAVES/KRW $ 1.13 $ 1.12 Best Waves gbanwere South Korean merie
WAVES/TRY $ 1.14 $ 1.11 Best Waves gbanwere New Turkish lira
WAVES/BCH $ 1.12 $ 1.11 Best Waves gbanwere Bitcoin Cash
WAVES/USDC $ 1.12 $ 1.12 Best Waves gbanwere USD//Coin
Ọnụ ego Waves na dollar (USD) - ọnụego ọnụego Waves gbakọọ na dollar site na mmemme anyị maka taa. Nnukwu oke nke Waves mgbanwe azụmahịa na mgbanwe dollar ka edobere na dollar. A kọwapụtara ọnụahịa Waves maka taa 06/06/2020 - dị ka ego maka mgbanwe nke Waves mụbaa site na ọnụego ugbu a nke Waves. A na-ahụta ọnụ ahịa nke Waves taa nke ọma site na ịlele uru nke Waves na ọnụego mgbanwe dị iche iche.
Nnukwu mgbakọ na mwepụ anyị gbakọtara ọnụ ego Waves kwa Nigerian naira dị ka nke a. Anyị na-enyocha usoro azụmahịa niile na mgbanwe maka taa, na-agbanwe ọnụego dollar na ịtụgharị ya na ọnụego dollar US ugbu a gaa na Nigerian naira. You nwekwara ike ịchọpụta uru nke Waves na Nigerian naira na azụmahịa dị na mkpụrụ ego a site na nyochaa tebụl azụmahịa na ọrụ anyị. Waves uru na dollar (USD) bụ isi ihe ngosipụta nke ọnụego azụmahịa na mgbanwe ego ego na Waves ego ego. Dabere na iwu azụmaahịa ahịa, ọnụahịa nke Waves maka azụmahịa na nnukwu ma ọ bụ pere mpe, dị ezigbo iche na ọnụọgụ ego na mgbanwe.
Waves onye mgbako na ntanetị - ọrụ maka ịmegharị ego nke Waves n'ime ego na ego ọzọ na ugbu a nke Waves. Saịtị anyị nwere ọrụ mgbako ozi ego ego pụrụ iche n'efu. Dịka iwu, a na-eji usoro ntụgharị ntanetị "Waves na Nigerian naira Calculator"). Ọ na-egosiputa ego nke Nigerian naira maka mgbanwe maka ego enyere maka Waves. Ihe oru ngo a nwere oru ihe nlere ego ego di iche na ntaneti.